Côte d’Ivoire: Fifidianana filoham-pirenena an-tsary · Global Voices teny Malagasy
Côte d'Ivoire: Fifidianana filoham-pirenena an-tsary
Voadika ny 03 Novambra 2010 20:21 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Italiano, English
Nanatontosa ny fandrotsaham-batony tamin'ny alalan'ny fifidianana filoham-pirenena voalohany indray tao anatin'ny folo taona izao ny alahady 31 oktobra teo ny mpifidy voasoratra anarana any Côte d'Ivoire, izany dia noho ny ady an-trano izay vaky nanomboka ny taona 2002 sy ny fifandirana nanaraka izany. In'enina nahemotra ny fifidianana nanomboka ny 2005 rehefa tonga teo amin'ny fetrany ny fe-potoana 5 taona nitondran'i Laurent Gbagbo amin'ny fomba ofisialy noho ny savorovoro nanodidina ny fanesorana ny fiadiana teny ampelatanan'ny mpioko sy ny lisi-pifidianana. Hotanterahina amin'ny 28 novambra ho avy izao moa ny dingana faharoa.
Na dia nisinisy ihany aza ny fahatarana teo amin'ny fisokafan'ny biraom-pifidianana dia nilamina ihany tamin'ny ankapobeny ny fandrotsaham-bato. Nanangana kaonty Twitter ny African Elections Project hanaraha-maso ny fivoaran'ny fifidianana nandritra ny dingana voalohany, ary nisioka an-tsarasera (ni-tweet) tamin'ny alalan'ny fampiasana ny tenifototra #civ2010 kosa olo-tsotra tia mitati-baovao sy ny mpisioka an-tserasera tany Côte d'Ivoire nandritra io tontolo andron'ny fifidianana io. Indreto ny sary voafantina hita tao amin'ny Twitter nandritra ny androm-pifidianana:
Filaharana teo ivelan ny biraom-pifidianana iray tany Abidjan. Saripika AEP
Filaharana teo ivelan ny biraom-pifidianana hafa tany Abidjan. Saripika AEP
Mpifidy iray falifaly nampiseho ny fanondrony voamarika ranomainty avy nifidy. Saripikan i Nnenna Nwakanma
Raha somary afa-po sy nilamindamina ny mpifidy tany Côte d'Ivoire nandritra ny androm-pifidianana, dia hita ho nanam-pahasahiranana kosa ireo mpiray tanindrazana aminy any Frantsa tamin'ny fanefana ny adidiny. Teo ho eo amin'ny 11.500 eo ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana tany amin'ny biraom-pifidianana 28 nisy tany amin'ny faritr'i Paris, saingy araka ny nolazain'ny France24 dia maro tamin'izy ireo no tsy nisokatra tamin'ny alahady ka niteraka hatezerana tamin'ny mpifidy. Naka sary ireo 500 nivorivory ivelan'ny masoivoho Ivoariana tao an-drenivohitra frantsay boriborintany faha-16 ny mpisioka an-tserasera Jolan K .
Ireo Ivoariana miandry ny fotoana hifidianany eo ivelan'ny masoivoho any Paris. Saripikan i Jolan K
Ny mpanoratra Amerikana Carol Spindel izay nanoratra boky momba ny fiainana an-tanàna ambanivohitra Ivoariana iray nitondra ny lohateny hoe In the shadow of the sacred grove, roapolo taona lasa izay dia nizotra nankany Côte d'Ivoire indray hiresaka momba ny fifidianana filoham-pirenena. Noho io toe-javatra iray io indrindra no nananganany bolongana iray, One village votes, izay anangonany antontan-kevitra miresaka ny fomba fifidianana. Tamin'ny alahady moa dia namoaka sary maromaro nitranga nandritra ny fifidianana tany avaratr'i Korhogo izy:
Fifidianana tany Korhogo. Saripikan i Carol Spindel
Andro vitsy lasa izay dia namangy fikambanam-behivavy iray izay nianatra ny fomba atao rehefa mifidy tao anaty aizina, miaraka amin'ny fanilo sy ny dikasarin'ny vatom-pifidianana tany an-tanàna kely ambanivohitra akaiky an'i Korhogo i Carol:
Vehivavy nianatra ny fomba fifidianana andro vitsy nialoha ny fifidianana. Saripikan i Carol Spindel.
Tokony ambara amin'ny fomba ofisialy ao anatin'ny 72 ora manaraka moa ny valim-pifidianana tamin'ny alahady teo.
Mozambika 15 ora izay